Hypnotix: တိုက်ရိုက်တီဗီနှင့်အခြားအရာများအတွက် IPTV streaming app Linux မှ
Hypnotix: တိုက်ရိုက်တီဗီနှင့်အခြားအရာများအတွက် IPTV streaming app
Linux Post Install လုပ်ပါ | 14/09/2021 06:00 | applications များ, NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအသုံးပြုလာသောအခါ GNU / Linux များ သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် operating system ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ အပန်းဖြေ၊ ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်ပျော်စရာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အများအားဖြင့်ခံစားခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည် သီချင်းများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများနှင့်အခြားကိစ္စများအထိ တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများအွန်လိုင်းမရ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများလည်းရှိသည် "Hypnotix".
"Hypnotix" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဇာတိအက်ပ် de la GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ခေါ်ဆိုခ Mint, မျိုးပွားရန်သုံးသည် တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများအွန်လိုင်းမရ။ အားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးကအဲဒါကိုတခြားမှာသုံးနိုင်တယ် ဆင်တူ၊ ဆင်းသက်လာသောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ညီသောဖြန့်ဝေမှုများ အနည်းငယ်ဥာဏ်ပညာနှင့်အတူ
Megacubo - ဘာသာစကားများစွာနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းအိုင်ပီတီဗွီဖွင့်စက်
ငါတို့သည်အလားတူခံစားမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြားအက်ပ်များအကြောင်းကိုပုံမှန်ထုတ်ဝေလေ့ရှိသည် တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများအွန်လိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ရှိနောက်ဆုံး link အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမရ။ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ပြီးသွားရင်သူတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ် ၀ င်စားတဲ့သူတွေအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
"MegaCube ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမပါဘဲလူတိုင်းရရှိနိုင်သော open source project တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအားဘရောက်ဇာမှတဆင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူတို့ကြုံတွေ့ရသောပြသနာများကိုရှောင်ရှား။ အွန်လိုင်းမှတီဗီကြည့်ရန်ရိုးရှင်းမြန်ဆန်ပြီးလက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် Windows (.exe) နှင့် Linux (.AppImage / .tar.gz) အတွက် executables များပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းသည်စပိန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီနှင့်အီတလီဘာသာစကားထောက်ခံမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ရဲ့ site ကနေကြည့်ရှုပြီး download လုပ်နိုင်ပါတယ် GitHub." Megacubo - ဘာသာစကားများစွာနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းအိုင်ပီတီဗွီဖွင့်စက်
Stremio - ခေတ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ Popcorn အချိန်အစားထိုးအဖြစ်
Popcorn Time - ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန် beta ဗားရှင်း ၄.၀ အသစ်
Kodi 18 « Leia »သည် DRM၊
1 Hypnotix - ဇာတိ Linux Mint အက်ပလီကေးရှင်း
1.1 Hypnotix ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Hypnotix ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
1.2.1 Linux Mint တွင်
1.2.2 ဆင်းသက်လာသောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်သော Distros များပေါ်တွင်
Hypnotix - ဇာတိ Linux Mint အက်ပလီကေးရှင်း
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်အပိုင်း ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ GitHub တွင် Linux Mint, "Hypnotix" အဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်
"IPTV M3U ကစားသမားတစ် ဦး"
"Hypnotix သည်တိုက်ရိုက်တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်ပံ့ပိုးပေးသော IPTV streaming application တစ်ခုဖြစ်သည်။"
ပြီးတော့သူတို့ကအဲဒါကိုထည့်တယ် IPTV ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်လိုက်ဖက်သည် သူတို့ဘာသုံးလဲ။
M3U URL များ
ပြည်တွင်း M3U သီချင်းစာရင်း
Linux Mint တွင်
ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက ဇာတိ Linux Mint အက်ပလီကေးရှင်း ၎င်းနှင့်သာလုံလောက်လိမ့်မည် ၎င်းကိုဂရပ်ဖစ်ဖြင့်ထည့်သွင်းပါ သူ၏မှတဆင့် ဆော့ဝဲအရောင်းဆိုင် o ဂရပ်ဖစ်အထုပ်မန်နေဂျာမရ။ သို့မဟုတ်၎င်းမှတဆင့်မအောင်မြင်ပါ terminal (console) အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်သည် command ကိုအမိန့်:
ဆင်းသက်လာသောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်သော Distros များပေါ်တွင်
အခြားသူများအတွက် ဆင်တူ၊ ဆင်းသက်လာသောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ညီသောဖြန့်ဝေမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် အရမ်းခက်တယ် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ မှီခိုမှုပြဿနာများ၊ စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း တပ်ဆင်မှု (သို့) သင့်တော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်အခြားပြဿနာများ အဲဒါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘဲ ရနိုင်သော .deb installer ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ သင်၏ repository ၌၎င်းသည်ကိစ္စအများစု၌အလုပ်မလုပ်ပါ။
သို့သော်ပုံမှန်အတိုင်းအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ခဲ့သောအောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
repository ကို install လုပ်ပါ လိပ်ပြာ: «kelebek333/mint-tools»
repository key ထည့်ပါ
ပြီးတော့စကားလုံးပြောင်းပါ ပြောင်စပ်စပ် အားဖြင့် ဆုံချက် အောက်ပါတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Distro နှင့်လိုက်ဖက်သောအခြားတစ်ခု Bionic, Focal, Groovy, Hirsute နှင့် Impish.
Hypnotix ကို install လုပ်ပါ
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ပြသနာမရှိပဲသုံးပြီးသုံးနိုင်ပါတယ် "Hypnotix" သူ့အကြောင်း GNU / Linux Distroအောက်ပါပုံများတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း
Rakuten TV - ခင်ဗျားရဲ့ Linux PC ကနေတစ်ဆင့်အခမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ
ပလူတိုတီတီဗီ - လိုင်းအသစ်ငါးခုကိုပြသမည်
အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရန် "Hypnotix" configuration next ကိုနှိပ်ပါ link ကိုမရ။ အချို့ကိုစူးစမ်းပါ အခမဲ့ M3U စာရင်းများ next ကိုနှိပ်ပါ link ကို.
တိုတောင်းခုနှစ်, ဇာတိ Linux Mint အက်ပလီကေးရှင်း ခေါ်ဆိုခ "Hypnotix" ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားစရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် GNU / Linux Distros တွေ့တဲ့အခါ တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲ အွန်လိုင်းမှတဆင့် IPTV လွှင့်သည် သုံးပြီး M3U စာရင်းများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Hypnotix: တိုက်ရိုက်တီဗီနှင့်အခြားအရာများအတွက် IPTV streaming app
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းတွင် chromecast ကိုအထောက်အပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ ငါ့လက်ပ်တော့တွင်ရုပ်ရှင်တစ်ကားရှိလျှင်၎င်းကို tv ကိုဥပမာအား vlc နှင့်လွှဲပြောင်းနိုင်သလား။
မင်္ဂလာပါ၊ Juanjosegarcia မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Hypnotix တွင်ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုငါဘယ်နေရာမှာစူးစမ်းခဲ့တာလဲ။ Hypnotix သည်အပြည့်အ ၀ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အခြားအရာများကိုအချိန်မရွေးထည့်သွင်းရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။
Zicoxy ၃ ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ချန်နယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၊ သင်ရူးသွားနိုင်သည်။
မျိုးပွားခြင်းအတွက်ဘာသာစကားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့နှင့်“ timeshift” ကိုပိတ်ဆို့ရန်၊ မောက်စ်ဘီးကိုတို့လျှင်သင်မျိုးပွားခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဘယ်အချိန်တိုက်ရိုက်လဲ ...
မင်္ဂလာပါ Zycoxy3 မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့ application အကြောင်းမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားနည်းချက်များကို Matrix သုံးစွဲသူအများစုတွင်တွေ့နိုင်သည်
yt-dlp သည်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်နှင့် youtube-dlc ၏လမ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်